Shirka Muqdisho oo qarka u saaran inuu burburo | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka Muqdisho oo qarka u saaran inuu burburo
Lafta-Gareen iyo Qoor-Qoor, oo saaxibo la leh Farmaajo ayaa diiday in amniga dalka lagu wareejiyo Ra'iisul wasaare Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirka ka socda Teendhada Afisyooni, ayaa qarka u saarab inuu burburo, oo lagu kala tago, kadib markii ay soo wajaheen caqabado horleh oo ka yimid madaxda qaar ee ka qeybgalaysa.
Wararka Keydmedia ka helayso Shirka ayaa sheegaya in Lafta-gareen iyo Qoor-Qoor ay kasoo horjeesteen in amniga qaranka lagu soo daro ajandaha, iyagoo difaacaya saxiibkooda Farmaajo.
Deni, Axmed Madoobe iyo Guudlaawe ayaa taageeray soo jeedinta in mas'uuliyadda amniga qaranka lagu wareejiyo Rooble iyo Xukuumadiisa, islamarkaana Farmaajo banaanka ka istaago.
Farmaajo ayay hoos yimaadaan wali taliska afarta Ciidan ee dalka - Booliska, Sirdoonka, Asluubta iyo Militeriga oo isaga magacaabey, waxaana arinta caqabad ku tahay inuu Rooble maamulo doorashadda iyo amnigeeda.
Shirka ayaa ku jira maalintii 4aad, welina wax natiijo ah kama soo bixin, iyadoo muuqata inuu jiro is-mariwaa xoog leh oo sababi karo inuu fashilmo, taasoo farxad gelinayso Farmaajo, maadaama uusan rabin in dalka doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo.
Mushariixinta mucaaradka ayaa u sheegay Rooble inuusan is daalin hadii taliyeyaasha Ciidamada ka amar qaadanayaan Farmaajo, oo isagana yahay qof awoodiida la xididay, oo go'aankiisa saameyn lahayn.
Waxay shacabka iyo Beesha Caalamka ka rajo dhigeen doorashadda oo noqotay mid aan dhamaad lahayn, oo socota hal sano ka badan, iyadoo aan jirin jiho cad oo looga bixi karo caqabadaha taagan.